Goo Hara ရဲ့အမွေကိစ္စများနှင့် ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူ ဘာတွေပြောခဲ့လဲ? | News Bar Myanmar
Goo Hara ရဲ့အမွေကိစ္စများနှင့် ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူ ဘာတွေပြောခဲ့လဲ?
Goo Hara သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူမရဲ့အကိုဖြစ်သူ Goo Ho In နှင့် မိခင်ဖြစ်သူတို့ဟာ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ Goo Hara ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာ အင်တာဗျူ းတစ်ခုမှာ သူမဟာ Goo Hara ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ဝက်ကိုရသင့်တယ်ဆိုပြီး ကြေငြာလိုက်လို့ပါ။
ဇူလိုင် ၂၃ရက်နေ့က ထုတ်လွှင်ခဲ့တဲ့ JTBC ရဲ့ Spotlight အစီအစဉ်မှာ Goo Hara ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကို အဆိုပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူ းခဲ့ပါတယ်။ Goo Hara သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို မိဘဖြစ်သူတွေက တစ်ယောက်တစ်ဝက်စီရခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဖေဖြစ်သူကတော့ သူရခဲ့တဲ့ပိုင်တိုင်မှုတွေကို သားဖြစ်သူ( Goo Hara ရဲ့အကို) ကိုသာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူကတော့ သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပက်သက်လို့ Goo Ha In က သူတို့ရဲ့အမေဟာ အခုလိုမျိုးအခွင့်အရေး မရသင့်ဘူးဆိုပြီး တရားရင်ဆိုင်မှုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဥပဒေအရ အမွေပိုင်ဆိုင်သူ အသက်ရှင်စဉ်ကတည်းက စောင်ရှောက်ခဲ့၊အကျိုးပြုခဲ့တဲ့သူတွေသာ အခုလိုအခွင့်အရေးကို ရသင့်လို့ပါ။ Goo Ha In ပြောပြချက်အရဆို သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးကို ကလေးဘဝတည်းက အရွယ်ရောက်သည်အထိ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဟာ သူတို့ရဲ့ဖခင်တစ်ဦးတည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူကတော့ သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက် ငယ်စဉ်ကတည်းက အိမ်မှထွက်သွားခဲ့ပြီး အနှစ် ၂ဝလောက် သူတို့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှ ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လတ်တလောလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျုးမှာတော့ အမေဖြစ်သူဖြေကြားထားပုံက ” ဒီလိုအမွေကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကတော့ Goo Hara ရဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူက ကျွန်မကိုအကြံပေးတာပါ။ ကျွန်မရဲ့ ရှေ့နေကို သူတို့ဘာသာ စီစဉ်လိုက်ဆိုပြီး ကျွန်မအကုန်လွှဲခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မသမီးက သေသွားပြီးပြီလေ၊ ဒီလိုအမွေတွေက ဘာလို့အရေးကြီးနေတော့မှာလဲ၊ ကျွန်မက ဘာမှမသိဘူး။ နောက်ဆုံးရမယ့်အမွေက ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတောင် ကျွန်မမသိဘူး” ဆိုပြီးဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ ” ဘယ်မိဘ ကိုယ့်သားသမီးကို ပစ်ထားချင်မှာလဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်မမှာလည်း အခြေအနေလေးတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အလုပ်အကိုင်လည်းမရှိဘဲ အိတ်တစ်လုံးနဲ့ ထွက်လာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်က ဘယ်လိုလုပ်သားသမီးတွေကို ထောက်ပံ့နိုင်မှာလဲ။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ကျွန်မမထောက်ပံ့ခဲ့တာပါ။ လူတွေကပြောတယ် ကျွန်မက ဖောက်ပြန်ပြီးအိမ်ကနေထွက်သွားတာလို့။ ဒါပေမဲ့ အဲ့တာကအမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ အခုခင်ပွန်းဟောင်း ( Goo Hara ၏ဖခင်) ကအထင်လွဲပြီး ကျွန်မကိုဓားနဲ့ထိုးသတ်မယ်လို့ ပြောလို့သာ ထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါ” ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မကြာသေးမီက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Goo Hara ရဲ့ဒိုင်ယာရီထဲမှာ သူမဟာ မိခင်ရဲ့ ဖောက်ပြန်နေမှုကို သိနေကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။ ဆွေးနီးမျိုးနီးတော်စပ်သူတွေရဲ့ ပြောစကားအရလည်း Goo Hara ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာ သားသမီးတွေအပေါ် လာတွေ့လို့ရတဲ့အနေအထားတွေရှိခဲ့သော်လည်း တမင်ရှောင်ဖယ်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Goo Hara ရဲ့အကိုဖြစ်သူကတော့ သူ့ညမရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုအမေဖြစ်သူကလည်း သူမမှာလည်း အဲ့လိုလှူဒါန်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ပြောပြန်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်တွေကတော့ Goo Hara ရဲ့မိခင်၏ မတရားသဖြင့် အမွေတွေလိုချင်နေမှုကြောင့် တအံတသြဖြစ်နေရပါတယ်။ မိဘဖြစ်ပါလျက်နဲ့ သားသမီးကို ကိုယ့်အကျိုးအတွက် မငဲ့ငြာပဲ ထွက်သွားပြီးကာမှ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အသံလည်းကြားရော ပြန်ရောက်လာတဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
Goo Hara တစ်ယောက်တမလွန်ကနေ ဒီအကြောင်းတွေကို သိရင်လည်း တော်တော်လေးစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ဒီပြသနာနှင့် ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ ကိုယ်ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comments မှာရေးသား နိုင်ပါတယ်နော်။
Next Choi Woo Shik ပြောပြခဲ့တဲ့ V နဲ့ သူ့ရဲ့ကြားက ရယ်စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခု »
Previous « Ji Chang Wook ရဲ့ Backstreet Rookies ရိုက်ကွင်းကို Coffee Truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ EXO's Chanyeol